Vohemar : Lakana rendrika, olona iray maty - Midi Madagasikara
DomicileFaits-DiversVohemar : Lakana rendrika, olona iray maty
Vohemar : Lakana rendrika, olona iray maty
Ny alahady 9 martsa teo no nandeha niandriaka ireto mpivady, tany ho any amin’ny tany amin’ny roa sasany hariva tany, kanjo sendra ny onja goavana izy ireo ka natelin’ny ranomasina. Rehefa nivadika ny lakana dia samy namonjy ny ainy izy roa ireto, lalina sady mahery anefa ny rano ka reraka tamin’izany ity tovovavy voa roapolo taona monja ka avy hatrany dia nilentika, ny tovolahy kosa nanao izay fara-heriny hanavotana ny tenany. Nisy nahita ny zava-niseho ireto mpiandrika namany ka avy hatrany dia nirotsaka an-tsehatra tamin’ny famonjena. Tsy avotra aintsony anefa ny ain’ity tovovavy fa sempotry ny rano, ilay tovolahy kosa avotra soa aman-tsara.
Haingana dia haingana moa ny fisehoany ka tsy misy hangalana bahana na hisainana lava, ny hariva koa moa efa miakatra be ny ranomasina ka tsy hita ny androtry ny loza ny vatan’ity tovovavy. Taorian’ny fitadiavana ny razana moa dia hita soa aman-tsara ihany ny vatana mangatsiaka, saingy ny ampitso maraina kosa rehefa nidina ny halalin’ny rano.
Eto an-drenivohitra tokoa mantsy no somary maina ny andro fa ny any amoron-tsiraka sy ny eny ambony ranomasina dia mahery sy manonja be, tsy mitovy amin’ny ety an-tanety. Eo matetika no miseho ny loza; sady iaraha-mahalala fa tsy dia manara-penitra loatra ny lakana hoentina manjono eto amintsika, ka zavatra kely monja dia ahitan-doza.